लोक सेवाको मोडलमा इजरायल जाने कामदारको यसरी हुँदैछ परिक्षा, कतिले दिए आवेदन ? – Media News Khabar
लोक सेवाको मोडलमा इजरायल जाने कामदारको यसरी हुँदैछ परिक्षा, कतिले दिए आवेदन ?
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको रोजगारीका लागि केयर गिभर पदमा एक हजार कामदारको आवेदन माग गर्‍यो । इजरायल सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार विभागले साउन १२ गते उक्त आवेदन माग गरेको हो ।
एक हजार कोटाका लागि विभागले आवेदन माग गरेकामा ९ हजार ६ सय ९९ ले आवेदन दिएका छन् । यो मागको तुलनामा नौ गुणा बढी हो । इजरायल पठाउने कामदारको छनौटका लागि भदौ १५ देखि २२ गतेसम्म परीक्षा गराउने विभागको तयारी छ ।
कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तिमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेका वा कक्षा १२ वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका कामदारबाट इजरायल जानका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । विभागका अनुसार इजरायल जान चाहनेहरूले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी कम्तिमा तीन महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।
लोक सेवा मोडलमा परीक्षा
इजरायल जान इच्छुक आवेदकले लोक सेवा आयोगले अबलम्बन गरेको विधिअनुसार परीक्षा दिनु पर्ने भएको छ । उक्त विधिअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएको छ ।
भदौको दोस्रो हप्ताभित्र परीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको विभागका निर्देशक महेन्द्रनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । पारदर्शी रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुने भट्टराईले बताए ।
‘सरकारले परीक्षा सञ्चालन गरेर इजरायल कामदार पठाउन सबै बाटो खुल्ला गर्नेछ । नेपाल र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने, ‘रोजगारी र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भएकाले परीक्षा मयार्दित हुन्छ । श्रम मन्त्रालयले लोकसेवा मोडलमा परीक्षा गराउने बताइसकेको छ ।’
विभागले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई पत्राचार गरी परीक्षा सञ्चालनका लागि सुझाव मागेको उनले जानकारी दिए । सीसीएमसीको सुझावअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुने भट्टराईले बताए ।
नेपाल र इजरायलबीच गत वर्षको असोजमा भएको श्रम सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा एक हजार नेपालीलाई केयर गिभरमा लैजाने भएको हो । श्रमिकमैत्री कानुन, बीमासहितको विभिन्न सुविधा तथा इजरायल जाने नेपाली कामदारले औषतमा मासिक दुई लाखसम्म कमाउने विभागले जनाएको छ ।
परीक्षापछि अन्तर्वार्तामा छनोट भएका एक हजार चार सय जनाको योग्यताक्रम सूचीको अन्तिम रोस्टर तयार पारी विभागले इजरायल सरकारको जनसंख्या तथा अध्यागमन निकाय (पिवा) मा पठाउने छ । विभागका अनुसार पिवाले माग संख्याको करिब ७५% (एक हजार नबढ्ने गरी) चिठ्ठाद्वारा कामदारको छनोट गर्ने छ । इजरायलका लागि लिइने अंग्रेजी भाषा परीक्षामा ४० अंकभन्दा बढी ल्याउने पास हुन्छन् । तर, मेरिटको आधारमा अन्तर्वार्ताका लागि उम्मेदवार तय हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।
इजरायलको हेरचाह केन्द्रमा सहायक कामदारका लागि जाने नेपालीको उमेर २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उचाइ कम्तिमा १.५ मिटर र तौल कम्तिमा ४५ केजी हुनुपर्ने छ । इजरायल गएर फर्किएका कामदारले आवेदन दिन पाउने छैनन् ।
एक हजार मागमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् ३ सय पुरुष र ७० प्रतिशत अर्थात् ७ सय महिला श्रमिकले रोजगारको आवसर पाउने छन् । श्रमिकले हवाइ भाडा, स्वास्थ्य बीमा, अभिमुखिकरण, पासपोर्ट, पीसीआरसहितको स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषसहित एक लाख ६५ हजार ७ सय शुल्क कामदारले व्यहोर्नुपर्ने छ ।
Previous साउदीले नेपालीको लागि गर्दै छ यति राम्रो काम – साउदीमा रहेका नेपालीमा खुसियाली
Next एमसीसी पास गराएरै छाड्ने संकल्पका साथ मैदानमै उत्रियो अमेरिका, सिंगो नेपाल तंरगित !